Waxyaalaha ugu fiican ee layliga TH taakulada wax soosaarka iyo Warshadda | Gimarpol
Xuduudaha Drill waxaa laga sameeyaa daawaha adag ee birta ah iyo bir gaar ah, oo guud ahaan la jaanqaadaya layliga dhagaxa fudud, si loogu qodo godka dhagaxa dhexroor dhan 50mm. Qalabka qodista waxaa loo isticmaalaa macdanta qashinka, sahaminta cilmiga dhulka, dhismaha biyaha, korantada, taraafikada, tunnelka, kaawada, mashruuca dhagaxa difaaca qaranka iwm.
Waxaan si joogto ah ugu qancin karnaa macaamiisheena la ixtiraamo tayadayada sare, qiimaha wanaagsan iyo taageerada wanaagsan sababtoo ah waxaan aheyn takhasus dheeri ah iyo dadaal dheeri ah oo aan ku sameyno qaab kharash-ku-ool ah Xulashada Weyn ee Shiinaha Anbit 40mm Taper Button Bit for Qodista Macdanta, Wax dhibaato ah oo isgaarsiin ah nagama haysatid. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa macaamiisha adduunka oo dhan inay nala soo xiriiraan iskaashi ganacsi.
Xulitaan Ballaaran oo loogu talagalay Shiinaha Rock Drill Bit, Button Bit, Waxaa naga go'an inaan la kulanno dhammaan baahiyahaaga oo aan xallino wixii dhibaato farsamo ah ee aad kala kulanto qaybahaaga warshadaha. Alaabtayada gaarka ah iyo xalalka iyo aqoonta ballaaran ee tikniyoolajiyadda ayaa naga dhigaysa xulashada la doorbiday ee macaamiisheena.
Xuduudaha Dahaarka ee Daabacan waxaa laga sameeyaa dahaadh adag oo bir ah iyo bir gaar ah, oo guud ahaan la jaanqaadaya layliga dhagaxa fudud, si loogu qodo godka dhagaxa dhexroorkiisu yahay 50mm Qalabka qodista waxaa loo isticmaalaa macdanta macdanta, sahaminta cilmiga dhulka, dhismaha biyaha, korantada, taraafikada, tunnel, kaawada, mashruuca dhagaxa difaaca qaranka iwm.
Qodo xoogaa Dhexroor MAYA * dhexroor badhanka Daloolin biyo Miisaanka
Waxoogaa badhan, goonno gaagaaban 2828
Goon dheer 3233
Nooc iskutallaab ah 2930
Hore: Qodo qodxo barroosinka xoogaa
Xiga: Dhagaxtuur dhagax gacmeed lagu qabto